फिटनेस पूरकहरू वास्तवमै काम गर्छन्? | चेकअप - कल्याण | सेप्टेम्बर 2021
भारी खेल स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समाचार, कल्याण चेकआउट खेलहरु कम्पनी, चेकआउट कम्पनी औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार समुदाय, कल्याण मनोरञ्जन
मुख्य >> कल्याण >> फिटनेस पूरकहरू वास्तवमै काम गर्छन्?
फिटनेस पूरकहरू वास्तवमै काम गर्छन्?
भिटामिन र फिटनेस पूरकहरूको व्यवसाय फस्टाउँदैछ। भर्खरको अनुसन्धान सुझाव दिन्छ कि प्राय जसो अमेरिकीहरूले कम्तिमा त्यस्तै एक उत्पादन बजारमा 90,000 भन्दा बढी विकल्पहरूबाट लिन्छन्। तर यो ठूलो उद्योग भित्र - मूल्य Billion billion अरब केहि अनुमानहरु द्वारा - उपभोक्ता उत्साह अनिश्चितता द्वारा नम छ। कडा नियमनको अभावमा, धेरै उत्पादकहरूले केहि वास्तविक लाभको साथ उत्पादनहरू बेच्छन्। सबैभन्दा खराब कुरा, खतरनाक नतीजाहरू सामान्य हुँदै गइरहेका छन्। अमेरिकन एसोसिएसन अफ पोइजन नियन्त्रण केन्द्रहरू रिपोर्ट गर्दछ चिन्ताजनक वृद्धि घटनाहरूमा पूरक खपतको परिणामस्वरूप।
कुन भिटामिन र सप्लीमेन्टहरू वास्तवमै लिन लायक छन्, र जसमा तपाई बढि समर्थन दिनुहुन्न तपाईको तर्फ तपाईंको फिटनेस लक्ष्यहरू ?
पूरक बोतलहरूमा भेटिएको कहिलेकाँही साहसी दाबीहरूलाई पन्छाएर, हामी सर्वेक्षणको लागि १,००० व्यक्तिहरूको उत्पादनहरूको दायरामा उनीहरूको वास्तविक अनुभवहरूको बारेमा सर्वेक्षण गर्छौं। हाम्रो अन्वेषणले पत्ता लगाउँदछ कि कुन उत्पादले विभिन्न फिटनेस स्तरमा र विभिन्न प्रकारका शरीर प्रकारका साथ व्यक्तिहरूको लागि परिणामहरू उत्पादन गर्दछ। थप रूपमा, हामीले सम्भावित पूरक साइड इफेक्टहरू पत्ता लगायौं, सम्भावित ट्रेड अफहरूको स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत गर्दै। चाहे तपाइँ नयाँ आहार र फिटनेस तालमेल शुरू गर्दै हुनुहुन्छ वा नयाँ स्थापनाको स्थापना गरिएको तालिकालाई समर्थन गर्नको लागि खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईले हामीलाई के पत्ता लगाउन चाहानुहुन्छ जान्न इच्छुक हुनुहुनेछ।
फिटनेसको लागि मैले कुन पूरक आहार लिनुपर्दछ?
केही फिटनेस पेशेवरहरू भिटामिन र पूरकहरूको जटिल संयोजनहरूको कसम खान्छन् ( अक्सर स्ट्याक भनिन्छ ), तर शुरुवात गर्नेहरूले एकल उत्पादनको साथ धेरै सहज महसुस गर्न सक्दछन्। यदि तपाईं आहार र व्यायामको हिसाबले नयाँ पात परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ भने- नयाँ वर्षको रिजोलुसन, सायद? तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कुन फिटनेस पूरक हाम्रो उत्तरदाताहरु लाई सबैभन्दा आवश्यक मानिन्छ (पछि बढि प्रत्येक पूरक को लागी के प्रयोग गरीन्छ)।
पुरुष र महिलाहरू पहिचान गर्न सक्ने सम्भाव्यता थियो मट्ठा प्रोटीन एक आवश्यक पूरकको रूपमा हुनसक्छ किनभने यो हो सम्बन्धित व्यापक रूपमा साझेदारी फिटनेस लक्ष्यहरू, जस्तै बढ्दो शक्ति र मांसपेशीको आकारको साथ। क्याफिनलाई पनि दुवै लिंगले धेरै सम्मान गर्थे। धेरै व्यक्तिहरूले हरेक बिहान यसलाई बानीको रूपमा खान्छन्, कफिमा पाइने रासायनिक पदार्थले कसरत प्रदर्शन सुधार साथै।
तथापि, अन्य पूरकहरूको विचारमा पुरुष र महिलाहरू भिन्न छन्। पुरुषहरूले सृष्टिलाई आवश्यकको रूपमा हेर्ने बढी सम्भावना देखाएका थिए, उदाहरणका लागि, जबकि महिलाहरूको एक धेरै प्रतिशतले भने कि निद्रा पूरकहरू र फ्याट बर्नरहरू उनीहरूको दिनचर्यामा आधारभूत हुन्।
स्वास्थ्य अनुभवले पूरक प्राथमिकतालाई पनि प्रभावित गरेको देखिन्छ। उन्नत फिटनेस उत्साहीको रूपमा पहिचान गर्ने उत्तरदाताहरूसँग अन्य फिटनेस स्तरहरूको तुलनामा प्रि-वर्कआउटको लागि विशेष पेन्सेन्ट थियो। फिटनेस नौसिखाहरू सफा राख्नका लागि यो बुद्धिमानी हुन सक्छ। विज्ञहरु भन्छन् यदि पूर्व कसरत प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको सिस्टमहरू बाढी गर्न सक्छन् चिनी, क्याफिन, र अन्य उत्तेजकको भयming्कर मात्राको साथ यदि तिनीहरूले गलत उत्पादन वा खुराकको लागि छनौट गर्छन्।
फिटनेस पूरकहरू कत्तिको प्रभावकारी छन्?
प्रत्येक पूरक को प्रयास गर्नेहरु मध्ये, व्यक्तिले कुन प्रतिशत वास्तवमा उनीहरूले चाहेको नतिजा प्राप्त गर्छ? पूर्व वर्कआउट र मट्ठा प्रोटीनको रिपोर्ट सफलताको उच्चतम प्रतिशत थियो , लगभग in मध्ये १० प्रयोगकर्ताहरूले यी पूरकहरू अत्यन्त वा अत्यन्त प्रभावकारी फेला पार्दछन्। उत्तरदाताहरूले तरकारी प्रोटीन र ब्रान्चेड-चेन अमीनो एसिड (BCAAs) को साथ उच्च सफलता दरहरू पनि रिपोर्ट गरे। यदि हाम्रो खोजहरूले अधिकांश व्यक्तिहरूलाई यी प्रोटीन-केन्द्रित उत्पादनहरू सहयोगी फेला पार्दछ भन्ने सुझाव दिन्छ भने, फ्याट हटाउनका लागि डिजाइन गरिएको पूरकहरूको बारेमा पनि त्यसो गर्न सकिँदैन। केवल %१% जसले फ्याट बर्नर लिनेहरू उनीहरूलाई धेरै वा अत्यन्त प्रभावकारी भेट्टाए; विज्ञहरू भन्छन् पूरक उद्योगको यस खण्डमा भ्रामक मार्केटिंग विशेष गरी व्यापक हो।
चाखलाग्दो कुरा, उत्तरदायीहरू जसले आफूलाई फिटनेस शुरुवातकर्ता ठानेमा सम्पूर्ण रूपमा फिटनेस पूरकहरू कम पाउँदछन् । यसको विपरित, उन्नत फिटनेस कोहर्टले पूरकहरूको प्रभावकारी पत्ता लगाउन सक्दछ। यी नतीजाहरू व्यायामको दर्दनाक आइरनहरूसँग सम्बन्धित छन्: अनुभवी एथलीटहरू प्राय: शुरुवातको भन्दा द्रुत रूपमा देखिने लाभहरूको मजा लिन्छन्। नयाँ भारोत्तोलन तालिकाको साथ, उदाहरणका लागि, विज्ञहरू भेट्टाउँछन् ती अनुभवी लिफ्टरहरूले तीनदेखि चार हप्तामा मांसपेशी वृद्धि देख्छन्, जबकि नौसिखाहरूले सामान्यतया दुई महिनाको लागि सुधार देख्दैनन्। किनभने हाम्रो उत्तरदाताहरूले lements. weeks हप्ता पछि पूरकको उपयोग गर्न छाडे, औसतमा, यो कुनै अचम्म होइन कि शुरुआती व्यक्तिहरूले उनीहरूलाई कम प्रभावकारी पाउँदछन्।
शरीरको प्रकारको आधारमा लोकप्रिय फिटनेस पूरकहरू के के हुन्?
आहार र फिटनेस लक्ष्यहरू शरीरको प्रकार अनुसार फरक हुन्छन्, र विभिन्न फिजिक्स भएका उत्तरदाताहरूले उनीहरूका आफ्नै लक्ष्यहरूका लागि केही पूरकहरू प्रभावकारी फेला पारे। जसले एक्टोमोर्फको रूपमा पहिचान गरे वा कहिँ बीचमा प्रोटीन प्रजातिहरू सबै भन्दा प्रभावकारी पाउँदछन् , यी कोटीहरूमा than०% भन्दा बढी उत्तरदाताहरूको साथ मट्ठा र वनस्पति प्रोटिनहरू फेला पार्दछ। स्पेक्ट्रमको अन्त्यमा, पूर्व कसरत मेसोमोर्फहरू र एन्डोमोर्फ्स बडी प्रकारहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो हिट थियो। थप रूपमा, .5२..5% मेसोमोर्फले क्रिएटिनलाई प्रभावकारी फेला पारे, अन्य शरीर प्रकारहरूको तुलनामा उच्च सफलता दर। समर्थन गर्न डिजाइन गरिएको गति वा शक्ति को छोटो फट , क्रिएटिन तार्किक रूपमा अप्ठ्यारो हुन्छ जोसँग पहिले नै मांसपेशिको स्वस्थ आधार रेखा छ।
तथापि, पूरकहरू उनीहरूको लागि जहिले पनि काम गरेजस्तो देखिदैनथ्यो जसलाई उनीहरूलाई सबैभन्दा धेरै आवश्यक पर्दछ। एन्डोमोर्फ्स , जो वजन कम गर्न संघर्ष गर्न सक्दछ, कम से कम सम्भावित फ्याट बर्नर पूरकहरूको प्रभावकारी हुन सक्छ। यस खोजले फिटनेस लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने जटिल प्रकृतिलाई रेखांकित गर्दछ: धेरैको लागि, आहार, व्यायाम, र पूरकहरू स्थायी परिवर्तन उत्पादन गर्न कन्सर्टमा काम गर्नुपर्दछ, र त्यसो भए पनि, प्रगति निराशाजनक ढिलो साबित हुन सक्छ। वास्तवमा, उत्तरदाताहरूको लगभग% 64% आहार र व्यायाम फिटनेस नतीजाहरू प्राप्त गर्न को रूप मा समान महत्त्वका थिए।
मधुमेह को लागी सामान्य रक्त शर्करा के हो
पूरक को साइड इफेक्ट
उनीहरूले प्राप्त गरेका लाभहरू बाहेक विशेष उत्पादनहरूबाट, उत्तरदाताको एक चौथाईले अर्को पूरक परिणामको अनुभव गरे: साइड इफेक्टहरू । क्याफिन सम्भवतः अनावश्यक प्रभावहरू उत्पादन गर्न सक्छ, जसमा समावेश हुन सक्छ टाउको दुखाइ, हडबडी, र अनिद्रा । मट्ठा प्रोटीन प्रयोगकर्ताहरूको एक चौथाईले साइड इफेक्ट पनि रिपोर्ट गर्‍यो; धेरैले यसलाई लिने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मुद्दाहरूको रिपोर्ट गर्छन्। एक ले कति उपभोग गर्छ यी लक्षणहरूलाई कम गर्न सक्छ। एउटा सर्वेक्षणमा जवाफ दिने व्यक्तिले ह्वा प्रोटीन लिएपछि अपचको वर्णन गरे तर सही अनुभव नलागेको आफ्नो अनुभवहीनतालाई भने।
पूर्व कसरत, जसमा सामान्यतया समावेश छ धेरै स्रोतहरू साइड इफेक्ट को पनि, अप्रिय लक्षण उत्पादन गर्न सक्छन्। एक उत्तरदाताले हामीलाई भने कि प्रि-वर्कआउटले उसको मुटुलाई पागल जस्तो बनायो, जसलाई यी उत्पादनहरूमा सामान्यतया समावेश गरिएको भारी मात्रामा क्याफिनको श्रेय दिन सकिन्छ। फ्याट बर्नरले प्रयोगकर्ताहरूको ठूलो प्रतिशतको लागि साइड इफेक्टहरू पनि निम्त्यायो - र यस कोटीका केही नकारात्मक परिणामहरू अस्थायी असुविधालाई पार गर्छन्। एलिभेटेड रक्तचाप देखि कलेजो क्षति सम्म अस्पताल भर्ना आवश्यक छ, साइड इफेक्ट अनियन्त्रित फ्याट बर्नरहरूको अक्सर स्थायी क्षति निम्त्याउँछ।
जहाँ व्यक्ति तिनीहरूको पूरक अनुसन्धान गर्दैछन्
पूरकहरूको अनिश्चितताको प्रभावकारिता र साइड इफेक्टहरू सामान्य छन्, उपभोक्ताहरूसँग नयाँ उत्पादको प्रयास गर्नु अघि उनीहरूको अनुसन्धान गर्न प्रशस्त कारणहरू छन्। उन्नत फिटनेस प्रकारहरू तिनीहरूको पूरक चयन मार्गदर्शन गर्न अनलाइन समीक्षाहरूमा भर पर्न सक्ने सम्भावना धेरै थियो , तर यो सबै उत्तरदाताहरूको लागि सूचनाको सबैभन्दा साधारण स्रोत थियो। अनुभवी एथलीटहरूले प्रशिक्षकहरू र फिटनेस सेलिब्रेटीहरूबाट सुझावहरू पनि विश्वासिलाए, इन्स्टाग्राममा सधैं विस्तार हुने। शुरुवातकर्ताहरू, यसको विपरित, साथीहरू र अनलाइन फोरमहरूबाट सिफारिसहरू विश्वास गर्न सबैभन्दा उपयुक्त थिए।
चाखलाग्दो कुरा, प्रत्येक फिटनेस स्तरमा १० मध्ये १ जनाले मात्र जवाफ दिए जुन तिनीहरू सोशल मिडिया विज्ञापनले डोरिएका थिए । अझै, भिटामिन र पूरकहरूको लागि विज्ञापन प्रशस्त इन्स्टाग्राम र अन्य प्लेटफर्महरूमा दुबै भुक्तान गरिएका पोष्टहरू र प्रभावकारहरू द्वारा कम स्पष्ट प्लगहरू मार्फत — धेरैले निराधार दावीहरू गरिरहेका छन्। शुरुवातकर्ता र मध्यवर्ती व्यायामकर्ताहरूको केवल %०% ले चिकित्सा पेशेवरहरूसँग परामर्श लिए, र उन्नत एथलीटहरू त्यसो गर्न कम सम्भावना थिए। विज्ञहरु भन्छन् पुरानो बिरामी भएकाहरूको लागि पूरक सुरू गर्नु अघि डाक्टरको भ्रमण गर्नु आवश्यक छ किनभने नयाँ उत्पादनहरूले उनीहरूको अवस्था बढाउन सक्दछ वा उनीहरूको हालको औषधिसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ।
सम्बन्धित: कम काम गरीरहेको थाँईरोइडलाई सहयोग गर्न सक्छ?
त्यसोभए तपाईं पूरक सुरू गर्न तयार हुनुहुन्छ?
जबकि हाम्रो खोजहरूले सुझाव दिन्छ कि धेरैले पूरकको उपभोगबाट महत्वपूर्ण फाइदा लिन्छन्, त्यहाँ नयाँ उत्पादहरू विचार गर्दा सतर्क हुनुपर्ने धेरै कारणहरू छन्। दुर्भाग्यपूर्ण साइड इफेक्ट देखि कुनै पनि प्रभाव मा, निराशाजनक परिणाम अत्यन्त सामान्य हो। हुनसक्छ यी खोजहरूले आहार र व्यायामको सब भन्दा पुरानो आधारलाई मजबुत बनाउँदछ: त्यहाँ कुनै एकल, द्रुत समाधान छैन। बरु, सफलता यथार्थवादी लक्ष्य र धेरै क्षेत्रमा वृद्धिशील सुधार मा निर्भर गर्दछ। पूरकहरूले तपाईंलाई तपाईंको स्वास्थ्य र फिटनेस महत्वाकांक्षाहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ, तर तिनीहरू एक्लै त्यसो गर्न असम्भव छ। यदि तपाईं एक पूरक आहार शुरू गर्न सोच्दै हुनुहुन्छ भने, पहिले तपाईंको डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् तपाईंको हालको औषधीसँग कुनै अन्तरक्रिया छ कि छैन।
यस अध्ययनको लागि, हामीले सर्वेक्षण ग 99्यौं 99 fitness फिटनेस पूरक प्रयोगकर्ताहरू जसले हप्तामा कम्तिमा एक पटक अभ्यास गर्थे। .1 .1 .१% पुरुषहरू थिए, र .9०.%% महिलाहरू थिए। १% भन्दा कम गैरबाइनरी थियो। .2.२% ले आफैलाई उन्नत फिटनेस स्तरमा माने, .2१.२% मध्यवर्ती थिए, र .6०..6% ले रिपोर्ट गरे कि तिनीहरू एक शुरुआती फिटनेस स्तरमा थिए। २.3..3% ले उनीहरूको शरीरको प्रकार एन्डोमोर्फिक, १ 16..5% एक्टोमोर्फिक, र २ 23.१% मेसोमोर्फिकका रूपमा वर्णन गरे। करीव% 35% उनीहरू एक वा बढी प्रकारका मिश्रण हुन् भन्छन्। औसतमा, सहभागीहरू १०.9 को मानक विचलनको साथ 35 35.१ बर्षका थिए। तिनीहरूको उमेर १ 18 देखि। 74 सम्म थियो।
डाटा र खोजहरू तथ्या .्कको रूपमा परीक्षण गरिएको थिएन न तौल। हाम्रो विश्लेषण कुनै पनि हालतमा सम्भव फिटनेस सम्बन्धी पूरकहरूको पूर्ण थिएन। यस विश्लेषणमा समावेश पूरकहरू अनुसन्धान र क्राउडसोर्सिcingको आधारमा सबैभन्दा लोकप्रिय पूरकहरूको सूचीको रूपमा छनौट गरिएको थियो। केवल कम्तिमा २ of को नमूना आकारका पूरकहरू मात्र हाम्रो दृश्यमा समावेश गरिएको थियो। यदि हामीले अधिक वा बिभिन्न पूरकहरू समावेश गरेको भए, हाम्रो खोजहरू बिभिन्न फरक हुन सक्छ। त्यहाँ स्व-रिपोर्ट गरिएको डाटा प्रयोग गर्न अन्तर्निहित कमजोरीहरू पनि छन्, जस्तो कि गरीब रिकल वा गलत मेमोरी, अति-अतिशयोक्ति, छनौट रिपोर्टि reporting, र अन्डरप्रेजेन्टेशन।
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25169440-the-effects-of-protein-supplements-on-muscle-mass-strength-and-aerobic-and-anaerobic-power-in-healthy-adults- एक व्यवस्थित समीक्षा /
5 उत्तम बट कसरत तपाइँ घर मा गर्न सक्नुहुन्छ
म कसरी बीमा बिना जन्म नियन्त्रण प्राप्त गर्न सक्छु?
तपाइँ गर्भवती हुँदा दुखाई को लागी के लिन सक्नुहुन्छ?
के म एकै समयमा एन्टिबायोटिक र प्रोबायोटिक्स लिन सक्छु?
के म गर्भवती छु पेप्टो बिस्मोल पिउन सक्छु?
के म सम्भोग भन्दा पहिले योजना बी लिन सक्छु?
के आवश्यक तेल खमीर संक्रमण को लागी राम्रो छ